नेपालमा हालसम्म २३ सय ६६ जनाको नमुना परीक्षण, संक्रमित थपिएनन् — Sanchar Kendra
काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमित बिरामी पत्ता लगाउन सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा नमुना संकलनको दायरा बढाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बुधबार मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले हालसम्म उच्च जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, दिपायल, जुम्ला र सुर्खेतबाट ८०२ जना व्यक्तिको नमुना संकलन भएको र ती नमुनाहरु ‘पीसीआर’ परीक्षणका लागि काठमाडौं ल्याइएको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलबाट परिचालित टोलीले ‘र्‍यापिड’ टेस्ट र पीसीआर प्रविधिबाट परीक्षण गर्न कैलाली र कञ्चनपुरमा १९८ व्यक्तिको नमुना संकलन गरेको उनले जानकारी दिए । प्रवक्ता डा. देवकोटाले दिपायलमा ३०० बढी व्यक्तिको नमुना संकलनको काम भइरहेको बताए ।
नेपालमा हालसम्म दुई हजार ३६६ जनामा कोरोनाभाइरसको परीक्षण गरिएको भन्दै पछिल्लो २४ घन्टामा नयाँ संक्रमित नदेखिएको उनले बताए । हाल उपत्यकामा १२ जना र उपत्यकाबाहिर १२२ गरी १३४ जना ‘आइसोलेसन वार्ड’मा रहेको प्रवक्ता डा. देवकोटाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, देशभर ‘क्वारेन्टाइन’मा ८ हजार ५८० जना रहेका छन् । क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैको स्वाब परीक्षण गरिने भन्दै उनले नमुना परीक्षणका लागि काठमाडौंबाहिर पनि उच्च क्षमताको मेसिनहरु जडान गरिएको जानकारी दिए ।
प्रवक्ता डा. देवकोटाले यसअघि संक्रमित ८ व्यक्तिको सम्पर्कमा आएकाहरुको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदन्डअनुसार ‘कन्ट्रयाक ट्रेसिङ’ भइसकेको जानकारी दिए । कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि सबै जिल्लामा ‘कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ स्थापना भइसकेको उनले बताए ।
नेपालमा अहिलेसम्म ९ जनामा मात्र कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । जसमा पहिलो संक्रमितलाई उपचारपछि निको भइसकेको छ । अरु संक्रमित ८ जनाको सामान्य अवस्थामा आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ । धनगढीमा चार तथा बागलुङ र टेकुमा दुई/दुईजना संक्रमितको उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।